May | 2021 | QEERROO
Posted on May 23, 2021 by Qeerroo
Dubartootni Oromoo lafee fi Dugda Qabsoo Bilisummaa Oromoo fi Riqicha qabsoo Bilisummaati.
Konfaransiin dubartoota Oromoo idil addunyaa kan Damee Dubartootaa fi Daa’immaan (DDD) ABOn qaphawe karaa ZOOM Waxabajjii, 22/2021 bifa bareedadhan geggeefamee jira. Walgahii kanarratti dubartoonni Oromiyaa keessaa fi biyyoota addunyaa mara irraa walitti dhufun haala yaroo amma biyyaa Ityophiyaa keessatti deemaa jiru irratti marii bal’aa geggafannee jirra.
Sagantaa kanarratti Hoggannonni ABO gadaa darbee fi hoggannonni hujii adda addaa geggeessa jiran irratti argamun, ibsa gabaabaa haalaa yaoo irratti kennani jiru. Addatti qooda shamarraan Qabsoo Bilisummaa Oromoo keessatti gaafaa qabsoon hidhannoo jalqabdu irraa kaasee hangaa har’atti dubartoota kaasun qabsoo hadhawaa diina walin godha waregamaani fi jiran kaasun mirgoota cululuqaa isaan kenna turan walgahichaaf ibsaani jiru. Waluma galatti qabsoo Oromoo asiin gahu keessatti qooda dubartootni karaa siyaasaa, diinagdee, waranaa, hawasummaa, Qeerroo fi jaarmayaa keessatti if qusannoo fi gantummaa male wareega kafala turan fi jiran dinqisifachuun, gara fuula duuratti waaroo gabrummaa ummataa keenya irraa kaafne nagayaa fi tasgabbii Oromiyaa keessatti fiduuf kana caalaa dubartootni ijarmuun murteessaa tahu erani jiru. Continue reading →
Posted on May 19, 2021 by Qeerroo
N ageenyi waaraan Lammiilee Oromiyaaf akka jiraatu darbees Impaayera biyyittiif akka dhugoomu yoo barbaadame MCBNO kan Lammiileen Oromiyaa keessatti qooda fudhatan ijaaramuutu kara filannoo Biyyoolessaatti nu geessa malee haala ammaan tana biyya keenya keessatti tahaa jiruun filannoo gaggeeffamu akka fudhatama hin qabaanne Lammiilee Oromiyaa irra darbee biyyootni Addunyaa Amerikaa fi Gamtaa Awurooppaa dabalatee akka filannoon Itiyoophiyaa keessatti gaggeeffamu ulaagaa filannoo hin guutne himuun beekamtii dhowwatanii jiru.
Haaluma kanaan, dhimma filannoo ilaalchisee MM Itiyoophiyaa Dr Abiyyii Ahimed walgahii dhoksaa kaabinoota fi humnoota amanamoo tikaa walitti qabuun “Filannoon milkaa’aa hin tahu, kana barree of qopheessuu qabna.” jechuun dubbatee jira.
Dhimma Dr Abiyyiin “”of qopheessuu qabna” jedhee dubbates biyya amma afaan qawween goolamaa jirtu nagaa fi tasgabbii dhabdee ammas haaluma kanaan dura dhaabbatanii lammiilee nagaa ajjeesuu, hidhuu fi dhabamsiisuun haala ammaan tana Oromiyaa keessatti Lammiilee Oromiyaa irratti adeemsifamaa jiruun olitti jabaatee itti fufuu qaba akka jedhan akeekuu isaaniis Qaruuxeen Qeerroo Bilisummaa Oromoo hordoffii godheen ajjeechaa fi hidhaan lammiilee nagaa irratti itti fufinsaan akka adeemamuuf jiru bira gahee jira.
Dhimma yeroo adda addaatti Addi Bilisummaa Oromoo “MCBNO ijaaramuu qaba” jedhee fi Kongireesiin Federaalawaa Oromoo (KFO) “filannoo dura mariin biyyaalessaa kan jaarmiyaalee fi dhaabbilee siyaasaa dabalatee qaamota hawaasaa hunda hirmaachise gaggeeffamuu qaba” jedhan irrattis yeroo adda addaatti dhiibbaa godhanis hanga ammaatti milkaayuu baatus yeroo ammaa kana biyyoota Addunyaa dabalatee qaamoleen hawaasaa hundi dhimma hundeeffamuu MCBNO ABOn labsetti walii galaa dhufanii jiru.
Lammiileen Oromiyaa Mootummaa Cee’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa ijaarratanii nagaa fi Tasgabbiin ni jiraatu.
Posted on May 9, 2021 by Qeerroo
Akkuma hunduu quba qabu adeemsi siyaasa impaayera Itoophiyaa abdiin gara nagaafi dimokiraasiitti deemuuf qabu gufatee sirna abbaa irree itti fufsiisuuf qaama aangoo siyaasaa biyyattii harkaa qabuun murteeffame. Abdiin saboota, sablammootaafi uummatoota biyyattii Itoophiyaa keessatti nagaan bu’ee gara filmaata haqaafi dimokiraatawaatti deemuudhaan lammiileen biyyattii qaama bakka isaan bu’u, kan itti amanan filachuuf hawwaafi of qopheessaa turaniiru. Qaamni humnaan aangoosaa itti fufsiifatee saboota biyyattii gabroomsee bulchuu barbaadu garuu filmaata haqaarraa baqatee sochii humnoota siyaasa biyyattiifi dirree siyaasaa dhiphisuu bira darbee guutummaatti cufe.
Sochiin siyaasaa cufachuufi biyyattiin gara badinsaatti deemuu kan hubate Addi Bilisummaa Oromoo Fulbaana 13/2020 wixinee Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa qopheessee Addunyaaf beeksise. Bu’uuruma kanaan KFO’nis yaaduma Adda Bilisummaa Oromoo (Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa) kan deeggaru waliigalteen biyyoolessaa biyya kanaaf akka barbaachisu ibse.
Qeerroon Bilisummaa Oromoos ibsa Fulbaana 27/2020 baaseen labsii Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Oromiyaa ABOn labse tumsuu akka qabu sababaan deeggaree ifa gochuun ni yaadatama. Ibsa isaa kana keessatti haalli nageenya Oromiyaa keessaa baay’ee yaaddessaa ta’uurraa kan ka’e Lammiileen Oromiyaa nagaan jiraachuudhaaf humni uummata nagaa dhorku harkasaa uummatarraa fudhatee mootummaan ce’umsaa akka ijaaramuu qabu hubachiiseera. Kana malees, daangaan Oromiyaa kallattii adda addaan weerarri itti aggaamamee waan jiruuf, kun ammoo caalmaatti nageenya lammiilee Oromiyaa waan gaaga’uuf, rakkoon hammaataan kana caalu akka hin dhufneef Mootummaan Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa ijaaramuu akka qabu itti amanuudhaan ejjennoo isaa ibsatee yaada kana milkeessuufis kan hojjetu ta’uu ibseera.
Addi Bilisummaa Oromoo Onkoloolessa 8/2021 Koree Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa hundeessuudhaan hojii erga eegalsiisee as Qeerroon Bilisummaa Oromoos baatilee 8 darbaniif hojii idileesaa godhatee hojjetaa tureera. Hojii baatiiwwan darban kanneenii keessatti Lammiileen Oromiyaa Mootummaa Cee’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa ijaarratanii nageenyi isaanii mirkanaa’ee gara filmaata haqaatti deemuu akka qaban guutuu guutummaatti hubachiisuun danda’ameera. Adeemsa hojii kana keessatti wareegamni ulfaataan kaffalamus, milkaa’inni guddaan argamee ijaarsi mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa sadarkaa xumuraarra ga’ee jira.
Koreen dhimma kana milkeessuuf utubame hojii bal’aa biyya alaafi keessatti hojjeteen sadarkaa goolabaarra geessiseera. Ammas ijaarsa Mootummaa Ce’umsaa Biyyoolessa Naannoo Oromiyaa kana xumuruudhaaf tumsi Lammiilee Oromiyaa barbaachisaafi olaanaa ta’uu Qeerroon Bilisummaa Oromoo ni hubata.
Labsiin Farra Shorokessuummaa Mana Maree Ministeerotaatiin Dhihaate Deemsa Karaa Nagaatti Hulaa Cufuuf Kan Ta’e Jedhamee kan Bocame Dha.
Posted on May 8, 2021 by Qeerroo
ABO, Caamsaa 3, 2021)
￼Seerri “Farra-Shororkeesummaa Mana Maree Ministeerotaa Itoophiyaatiin gaafa Caamsaa 1, 2021
￼dhaabota ABUT fi “Shene” jedhaman tarree dhaabota shororkeessitootatti ramaduuf jedhamee qophaa’e ta’e jedhamee humnoota hidhatan suduudaan maree siyaasa irraa fageessuu fi walumaagalatti daba maree siyaasaa danquuf itti yaadame godhame dha. Seera qophaa’e kana keessatti jechi “Shene” jedhu akkamiin akka dhimma itti ba’ame beekuu baannus, akka tilmaama keenyaatti garuu jechi “shanee jedhu nama lammii Oromiyaa ta’ee fi kan dhaaba Paartii Badhaadhinaa hindeeggerre hunda dha. Haa ta’u malee, sirnaa fi caasaa bulchiinsa Gadaa keessatti jechi “shanee” jedhu jecha eebbifamaa fi kabajamaa kan aadaa fi duudhaa Oromoo of keessatti hamaate dha. Jecha kana seera “farra-shororkeessummaa waliin walitti hidhanii gocha cubbamaa akka ibsu gochuun aadaa, afaanii fi duudhaa Oromoo xiqqeessuu fi abaaruu dha.
Jechi sun maaliifuu dhimma itti yoo ba’ame garuu, seerri dhihaate kun jeequmsa siyaasaa biyyattiin keessa seente karaa nagaatiin furuuf yaalii taasifamu gufachiisuuf itti yaadamee kan qophaa’e dha. Keessattuu yeroo hawaasni addunyaa kanneen akka Ameerikaa fi Gamtaan Awurooppaa rakkoo walxaxaa fi gaaga’ama biyyattiin keessa seente furuuf tattaaffi godhaa jiran yeroo murteessaa kana keessatti seera balfatamaa jeequmsa baballisu Kanaan asi ba’uun dalagaa haalaan cubbamaa dha.
Murni Itoophiyaarratti amma aangoo qabatee jiru seer-qabeessummaan isaa Onkoloolessa 05, 2021 waan raawwateef biyyatti kan bulchaa jiru karaa seeraan alaa (illegal) ta’een akka ta’e eenyu biraayyu dhokataa miti. Manni Maree Ministeerotaa, Paarlaamaan biyyatti akkasumas aanga’ootni mootummichaa guutummatti seer-qabeessumaan isaanii waan dhumateef seera baasuufis ta’e seera ba’ee jiru hojiitti hiikuuf mirga seeraa fi heeraa hin qabani. Itoophiyaan jeequmsa heeraa (constitutional crisis) keessa seentee waan jirtuuf, seerrii-shororkeesmmaa kun, utuma paarlaamaatiin raggaasifameellee, paarlaamaan sunuu seera qabeessa waan hin taaneef, seera raggaasisuufis ta’e filannoo geggeessuun seeraan ala dha. Continue reading →
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa maqaa seera kabachiisuutiin Oromiyaa keessatti seerri cabaa akka jiru ibse.
[SQ Caamsaa 6/2021]
keessaa buufataalee poolisii 21 irratti qorannoo taasiseen haala qabinsaafi hidhamuu hidhamtootaa kan ibse Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa, sarbamni mirga dhala namaa Lammiilee Oromiyaa irratti raawwataa akka jiru ifoomseera.
Buufataaleen poolisii qorannoon irratti geggeeffame: Jalduu, Abuna-Gindabarat, Gindabarat, Baatuu, Adaamii Tulluu, Shaashamannee (buufata poolisii aanaa 2ffaa), Dodolaa, Adaabbaa, Gadab-Asaasaa, magaalaa Arsii Nagallee, Adaamaa (kutaalee bulchiinsaa sadii), Magaalaa Asallaa (buufata poolisii 2), Ciroo, Boosat, Darraa, Roobee, Haromayaafi Awwadaay fa’a.
Qorannoo Komishinichaa keessatti bal’inaan kan ibsaman dhimma qabinsaafi akkaataa to’atamuu hidhamtootaati.
Komishinichi erga Artist Haacaaluu Hundeessaa ajjefamee namoonni hedduun hidhamuu kan ibse yommuu ta’u, hidhamtoota 128 ta’an gaaffiifi deebii taasisee qorannoo kana akka baaseefi hidhamtoota hedduummoo qaamaan biratti argamuun kan irraa odeeffate ta’uu komishinichi qorannoo baatii lamaaf walitti fufinsaan geggeessaa ture kanaan ibseera.
Qorannoo kanaan sarbama mirga namaa hidhamtoota irratti raawwataman kanneen ijoo ta’an ibsee qaamonni yakka kana raawwatan gaafatama akka fudhataniif akeekeera.
Sarbamoonni mirga namaa hidhamtoota irratti raawwataman:
1. Seeraan ala hidhamuufi qabinsi hidhamtootaa mirga namaa kan sarbu ta’uu.
2. Ajajni mana murtii kabajamuu dhabuu Continue reading →
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haala Hayyu Dureen ABO itti jiran ilaaluuf deemanii dhorkaman
Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa haala Hayyu Dureen ABO itti jiran ilaaluuf
dhorkaman.[SQ Caamsaa 5/2021]Caamsaa 3/2021 halkan walakkaa qaamonni nageenyaa PP mooraa mana jireenyaa Hayyu Duree ABO Jaal Daawud Ibsaa seeraan ala cabsanii erga seenanii haga ammaatti mooraa marsanii kaan mooraa keessa jiru. Qabeenyi saamamee namoonni mooraa sana jiraatanis reebamaniiru. Komishiniin Mirga Namoomaa Itoophiyaa gara mana jireenyaa Hayyu Duree deemuudhaan haala Jaal Daawud Ibsaa itti jiran hubachuu deemanii isaanis waraana PP balbalarra jiraniin dhorkamani. Mooraa mana jireenyaa Hayyu Duree haga ammaatti eenyuyyu seenuu hin dandeenye. Haalli isaan keessa jiran kan ibsu odeessi argame hin jiru.